IXiaomi Mi 8 Pro izakwaziswa ngaphandle kwe China ngokusemthethweni | I-Androidsis
UEder Ferreño | | IsiTshayina Android, Iiselfowuni, Xiaomi
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uXiaomi wazisa ngeefowuni zakhe ezintsha, eziza kugqibezela uluhlu lweMi 8. Enye yeefowuni ezimbini eboniswe kulo msitho yiXiaomi Mi 8 Pro, isiphelo esiphezulu esineenkcukacha ezifanayo neMi 8 ngaphandle kwenkcukacha enye. Kuba le fowuni intsha inenzwa yeminwe phantsi kwesikrini.
Uphawu lwaseTshayina lujoyine lo mkhwa ufumana ubukho kwimakethi ye-Android. Okwangoku, i ukumiliselwa kwale Xiaomi Mi 8 Pro kwakubhengezwe e-China kuphela. Nangona inkampani ibhengeza ukuba kungekudala iza kufikelela kwiimarike ezintsha.
Ummeli wophawu usebenze ekubhengezeni oko Le Xiaomi Mi 8 Pro ayizukulinganiselwa kuphela kwimakethi yase China. Ngenxa yokuba intetho yayo ayikhankanyi mihla okanye amaxabiso okuphehlelelwa kwayo kwamazwe aphesheya, bekukho amathandabuzo ngayo.
Ngoku Akukho mihla inikiweyo yokuphehlelelwa kwesi siphelo.. Nangona ubuncinci inkampani sele iqinisekisile ukuba iza kuphehlelelwa kwintengiso yamanye amazwe. Eyona nto inokwenzeka kukuba eSpain kuya kubakho ukuthenga, kuthathelwa ingqalelo iinzame zorhwebo ukuba zibekho kwilizwe lethu.
Kodwa okwangoku kuya kufuneka silinde de ulwazi oluthe kratya luyaziwa malunga nokuba le Xiaomi Mi 8 Pro iza kufika nini kwintengiso. Ngemodeli yoqobo bekufuneka silinde ngaphezulu kweenyanga ezimbini ukuze izokwaziswa eSpain. Khumbula ukuba iMi 8 ifike ekuqaleni kuka-Agasti.
Ke ngekhe kumangalise ukuba kuya kufuneka ulinde de kube nguNovemba ukuze le Xiaomi Mi 8 Pro isungulwe eSpain. silinde uphawu ukusixelela ngakumbi. Zombini malunga nomhla wokukhutshwa kunye nexabiso lefowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi 8 Pro izakwaziswa kungekudala ngaphandle kwe China
Yintoni imowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye yenzelwe ntoni?
Uluhlu lweefowuni oluya kufumana i-Android 9.0 Pie